China Automatic Warehouse System emepụta na ndị na -eweta ya IVEN
Usoro AS/RS na -enwekarị akụkụ dị ka sistemụ Rack, ngwanrọ WMS, akụkụ ọkwa ọrụ WCS na wdg.
A nabatara ya n'ọtụtụ ebe mmepụta ọgwụ na nri.
Aha nke sistem:
AS/RS (Sistemụ Nweghachite Nchekwa onwe)
Usoro ụlọ nkwakọba ihe akpaghị aka
Foto nke sistem:
Nkọwa nke Sistemu:
Sistemụ njikwa ụlọ nkwakọba ihe (WMS) bụ ngwanrọ na usoro na -enye ohere ka òtù dị iche iche na -ejikwa ma na -arụ ọrụ ụlọ nkwakọba ihe site na oge ngwongwo ma ọ bụ ihe abanye n'ụlọ nkwakọba ihe ruo mgbe ha ga -apụ. Ọrụ n'ime ụlọ nkwakọba ihe gụnyere njikwa ngwa ahịa, usoro ịhọpụta na nyocha.
Dịka ọmụmaatụ, WMS nwere ike ịnye visibiliti n'ime ngwongwo nke nzukọ n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ma ọ bụ na akụrụngwa ma ọ bụ n'ụzọ njem. Ọ nwekwara ike jikwaa ọrụ ọkọnọ ọkọnọ site na onye nrụpụta ma ọ bụ onye na -ere ahịa ruo n'ụlọ nkwakọba ihe, emesịa na -ere ahịa ma ọ bụ ebe nkesa. A na -ejikarị WMS n'akụkụ ma ọ bụ jikọtara ya na sistemụ njikwa njem (TMS) ma ọ bụ sistemụ njikwa ngwa ahịa.
Ọ bụ ezie na WMS dị mgbagwoju anya ma dịkwa ọnụ iji mejuputa ma na -agba ọsọ, òtù na -enweta uru nwere ike igosipụta mgbagwoju anya na ọnụ ahịa ya.
-Imejuputa WMS nwere ike inyere otu nzukọ aka belata ụgwọ ọrụ, melite izi ezi nke ngwa ahịa, meziwanye mgbanwe na nzaghachi, belata njehie n'ịhọrọ na mbupu ngwongwo, ma melite ọrụ ndị ahịa. Usoro njikwa ụlọ nkwakọba ihe ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ na ezigbo data, na-enye ohere ka nzukọ ahụ jikwaa ozi kachasị ugbu a na ọrụ dịka iwu, mbupu, nnata na mmegharị ngwongwo ọ bụla.
Nke gara aga: Ngwọta ngwugwu ọgwụ na ụlọ ọgwụ sekọndrị
Osote: Igwe ịsa mmiri na -ejuputa igwe
Nkwakọba ọgwụ na ọgwụ ụlọ ọgwụ So ...
Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe eji emejuola agịga, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Ampoule À Coudre Led,